mi community - Myanmar.png (61.52 KB, Downloads: 16)
2019-04-12 03:32:28 Upload
Hello Myanmar Mi Fans ,
Warmly welcome from Mi Community Myanamar Region Section under Other Countries Sub-forum. While you guys are having fun here in Mi Community, do remember to show your utmost respect to the fellow Mi Fans around you. We sincerely hope that this will be an online platform where everyone can have fun and feel safe as we share and learn from each other! So , I would like to pay your attention to provide an enjoyable in Mi Myanmar Community. Here is/are the RULES AND REGULATIONS you should read before posting any thread .
Can Use English Or Unicode Or Zawgyi Font
You can use English or native Myanmar language (both Myanmar Unicode or Zawgyi font as you like) on only Mi Myanmar Community Sub-Forum. This special chance is only for Myanmar Community Sub-Forum and please note don't use native Myanmar language on other Sub-forum.Else , you will getawarning or ban foraperiod of time for using myanmar laguage/Myanmar Font on other Sub-forum.
Super Moderator Ko Hset Gyi
Moderator Than Dana
မွနျမာSub-Forum မှကွိုဆိုပါတယျ။Mi Community အသုံးပွုသူမြားအနဖွေငျ့အခငျြးခငျြး ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွငျ့ လေးစားသမှုပွုပေးကွပါ။ ပြျောရှငျစရာကောငျးသောMi Community Myanmar Sub-Forum တဈခုဖွဈလာဖို့အတှကျ အားလုံးလိုကျနာဖို့လိုအပျသောစညျးမဉျြးစညျးကမျးအခြို့နှငျ့ လမျးညှနျခကျြအခြို့ဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံးမွနျမာ Sub-Forum မှာရှိတဲ့ထိပျဆုံးမှာ ပွထားသညျ့ပိုဈ့မြားကို အရငျဖတျစလေိုပါတယျ။ အကွောငျးအရာထပျနသေော ပိုဈ့မြား၊မေးခှနျမြားကို ရှောငျကဉျြရနျ မိမိ ပိုဈ့အဟောငျးကို Edit ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ထပျနသေောအကွောငျးအရာတူပိုဈ့မြား ၊ မေးခှနျးမြားကို ခဏခဏ တငျခွငျးဟာ သငျ့ကို သတိပေးခွငျး / ရကျအနညျးငယျဘမျးခွငျးမြားအပွုလုပျခံရနိုငျပါတယျ။ ပိုဈ့အသဈ၊ မေးခှနျးအသဈတဈခု မတငျမီမှာ micommunity မှာအရငျရှာစလေိုပါတယျ။ အကွောငျးအရာတူ ထပျနတေဲ့ ပိုဈ့မြား၊ မေးခှနျးမြား ထပျမံ တငျပါကထို ပိုဈ့/မေးခှနျး မြားဟာ ဖကျြ ခံရမှာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျ/ ယူနီကုဒျ / ဇျောဂြီ ကွိုကျနှဈသကျရာ သုံးနိုငျသညျ
သငျ့အနဖွေငျ့Myanmar Mi Community Sub-Forum အတှငျးအင်ျဂလိပျ / ယူနီကုဒျ / ဇျောဂြီ ကွိုကျနှဈသကျရာ တဈမြိုးမြိုး သုံးနိုငျသညျ။ သတိပွုရနျမှာမွနျမာစာ (ယူနီကုဒျ /ဇျောဂြီ) ဖွငျ့ ရေးသားခွငျးကို Myanmar Sub-Forum မဟုတျသောအခွားနရောမြားတှငျ အသုံးပွုပါက သငျ့အနဖွေငျ့ သတိပေးခံရခွငျး ၊ အဘမျးခံ ရခွငျးတို့ဖွဈနိုငျပါသညျ။
ပိုဈ့အသဈတငျခွငျး၊Reply ပွနျခွငျးတို့အားအဓိပ်ပါယျပျေါလှငျအောငျ အကွောငျးအရာပွညျ့စုံစှာ ရေးသားရနျလိုအပျသညျ။ MiCommunity သညျ သငျ၏ခကျြဘောကျ တဈခုမဟုတျကွောငျးကို သတိပွုရနျလိုအပျသညျ။
အောကျပါအခကျြမြားကိုMi Community တှငျမပွုလုပျရနျပွငျးထနျစှာတားမွဈထားသညျ။
ကွမျးတမျးသောစကားလုံးမြား/ အခငျြးခငျြးလေးစားမှုမရှိခွငျး / စညျးမဉျြးမြားအားခြိုးဖောကျခွငျး
လိငျအသားပေး ဓာတျပုံမြား ၊ ဗီဒီယို ဖိုငျမြား တငျခွငျး
လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုငျငံရေး အကွောငျးမြားပိုဈ့တငျခွငျး၊ ဆှေးနှေးခွငျး
အခငျြးခငျြးလေးစားမှုမရှိ ရိုငျးစိုငျးခွငျး ၊ တိုကျခိုကျခွငျး မြားပွုလုပျခွငျး
မိမိအားထုတျမှုမပါဘဲ သူတဈပါး၏ ကွိုးစားအားထုတျထားသညျမြားကို ခိုးယူခွငျး ၊ Credit/Sourceမပေးဘဲဖျောပွခွငျး
Mi Community အတှငျးXiaomi / Mi / Redmi / POCO အစရှိသောပစ်စညျးမြားအပါအဝငျ မညျသညျ့ ဖုနျး/ပစ်စညျးမဆို တိုကျရိုကျရောငျးခခြွငျး/တဈဆငျ့ပွနျလညျရောငျးခခြွငျးမြား ပွုလုပျခှငျ့မရှိပါ။
ထိုသို့ပွုလုပျမိပါကပထမအကွိမျ Message ပို့သတိပေးခွငျးခံရမညျဖွဈပီး နောကျတဈကွိမျ ထပျမံကွူးလှနျပါကအနညျးဆုံး ၁၄ ရကျ အဘမျး ခံရပါမညျ။
အထကျပါစညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားအား လိုအပျခကျြ အရ အခြိနျမရှေး ထပျမံဖွညျ့စှကျ ပွုပွငျ မညျ။
သငျ၏အရေးကွီးသောပွဿနာ မေးခှနျးမြား တှငျ Super Moderator (or) Moderator မြားအား မနျးရှငျး ချေါနိုငျသညျ။ ကြှနျုပျတို့မှသငျ့ပွဿနာမြားအား အကောငျးဆုံးဖွရှေငျးပေးနိုငျရနျ ကွိုးစားပေးပါမညျ။
မြန်မာSub-Forum မှကြိုဆိုပါတယ်။Mi Community အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အချင်းချင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြင့် လေးစားသမှုပြုပေးကြပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောMi Community Myanmar Sub-Forum တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက် အားလုံးလိုက်နာဖို့လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချို့နှင့် လမ်းညွှန်ချက်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးမြန်မာ Sub-Forum မှာရှိတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ပြထားသည့်ပိုစ့်များကို အရင်ဖတ်စေလိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာထပ်နေသော ပိုစ့်များ၊မေးခွန်များကို ရှောင်ကျဉ်ရန် မိမိ ပိုစ့်အဟောင်းကို Edit ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်နေသောအကြောင်းအရာတူပိုစ့်များ ၊ မေးခွန်းများကို ခဏခဏ တင်ခြင်းဟာ သင့်ကို သတိပေးခြင်း / ရက်အနည်းငယ်ဘမ်းခြင်းများအပြုလုပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ပိုစ့်အသစ်၊ မေးခွန်းအသစ်တစ်ခု မတင်မီမှာ micommunity မှာအရင်ရှာစေလိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာတူ ထပ်နေတဲ့ ပိုစ့်များ၊ မေးခွန်းများ ထပ်မံ တင်ပါကထို ပိုစ့်/မေးခွန်း များဟာ ဖျက် ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်/ ယူနီကုဒ် / ဇော်ဂျီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်သည်
သင့်အနေဖြင့်Myanmar Mi Community Sub-Forum အတွင်းအင်္ဂလိပ် / ယူနီကုဒ် / ဇော်ဂျီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးမျိုး သုံးနိုင်သည်။ သတိပြုရန်မှာမြန်မာစာ (ယူနီကုဒ် /ဇော်ဂျီ) ဖြင့် ရေးသားခြင်းကို Myanmar Sub-Forum မဟုတ်သောအခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုပါက သင့်အနေဖြင့် သတိပေးခံရခြင်း ၊ အဘမ်းခံ ရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပိုစ့်အသစ်တင်ခြင်း၊Reply ပြန်ခြင်းတို့အားအဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်အောင် အကြောင်းအရာပြည့်စုံစွာ ရေးသားရန်လိုအပ်သည်။ MiCommunity သည် သင်၏ချက်ဘောက် တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကို သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
အောက်ပါအချက်များကိုMi Community တွင်မပြုလုပ်ရန်ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားသည်။
ကြမ်းတမ်းသောစကားလုံးများ/ အချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိခြင်း / စည်းမျဉ်းများအားချိုးဖောက်ခြင်း
လိင်အသားပေး ဓာတ်ပုံများ ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များ တင်ခြင်း
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး အကြောင်းများပိုစ့်တင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း
အချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိ ရိုင်းစိုင်းခြင်း ၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း များပြုလုပ်ခြင်း
မိမိအားထုတ်မှုမပါဘဲ သူတစ်ပါး၏ ကြိုးစားအားထုတ်ထားသည်များကို ခိုးယူခြင်း ၊ Credit/Sourceမပေးဘဲဖော်ပြခြင်း
Mi Community အတွင်းXiaomi / Mi / Redmi / POCO အစရှိသောပစ္စည်းများအပါအဝင် မည်သည့် ဖုန်း/ပစ္စည်းမဆို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း/တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
ထိုသို့ပြုလုပ်မိပါကပထမအကြိမ် Message ပို့သတိပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပီး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံကြူးလွန်ပါကအနည်းဆုံး ၁၄ ရက် အဘမ်း ခံရပါမည်။
အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုအပ်ချက် အရ အချိန်မရွေး ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြုပြင် မည်။
သင်၏အရေးကြီးသောပြဿနာ မေးခွန်းများ တွင် Super Moderator (or) Moderator များအား မန်းရှင်း ခေါ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်ပြဿနာများအား အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားပေးပါမည်။
Disclaimer: Mi Community Myanmar Management Staff is not responsible if you don't read the rules and don't follow the rules. If your thread or post gets deleted and if you get any warnings or ban, then only you will responsible for that. Don't ask for unnecessary questions in PM, and don't fill unnecessary complaints because all the rules are stated clearly. Please read the rules beforehand. Thank You!
Mi Community Myanmar Management Team
Ko Wunna | from Mi Note 3
Mod position is vacant. What's the requirement to becomeamod?
Thankd for sharing!!!
thanks for myanmar sub-forums rules and regulations
MAUNG MAUNG PYAESONE |
So great for sharing.......
Can I wishes to all sub-forum Mi Community for better than ......
noted........thanks for sharing